Wasiirka Caafimaadka Dowladda Puntland oo Kormeer Shaqo ku jooga Gobolka Gardafuu – Radio Daljir
Wasiirka Caafimaadka Dowladda Puntland oo Kormeer Shaqo ku jooga Gobolka Gardafuu
Agoosto 13, 2015 7:30 b 0
Khamiis, Ogoosto 13, 2015 (Daljir) —Wasiirka Caafimaadka Puntland C/naasir Cismaan Cuuke iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira dhakhaatiir iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Gardafuu ee Punltand ayaa gaaray degmada Caluula oo ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliya.
Inta badan dadweynaha gobolkaas ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay degmooyinkii ay sii mareen oo ay ku jirto degmada Baargaal ,iyadoo wasiirka caafimaadka uu u kuur-galayay xaaladda xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanadaas.
“Wasaaradda caafimaadka halkan si wacan ugama aysan howl-galin sanadihii la soo dhaafay,wasiir waxaan kaa dalbanaynaa inaad qorshe cusub ka yeelato gobolka iyo sidii loo hormarin lahaa adeegyadiisa caafimaad “ ayuu yiri mid ka mid waxgaradka deegaanka San-weyn oo la hadlayay wasiirka.
Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasin oo isna ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa sheegay in wafdigan ay maalmo joogi doonaan deegaanka Caluula si ay kulamo u la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Gardafuu.
Sidoo kale wasiirka ayaa kormeeray xarumaha caafimaad ee degmooyinka Xaabo ,Bargaal iyo waliba Caluula ,waxaana uu sheegay in dhawaan ay dawooyin soo gaarsiin doonaan goobihii caafimaad ee uu booqday.
Ugu dambeyn, bilo ka hor ayey ahayd markii dhowr caruur ah ay cudurka Jadeecada ugu geeriyoodeen deegaano hoos taga gobolka Bari ,waxaana booqashada wafdigan ay ku soo beegmaysaa ,iyadoo abaaro xoogan ay ka jiran qaybo kamid ah gobolka Gardafuu.
Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland oo Garowe kula Shiray madax ka socotay Hay’adda UNDP
Madaxweyne Gaas oo Kulamo la Qaadanaya Maamulka Gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo